हाम्रो ग्लोबल मिडिया पार्टनरशिप मा शामिल हुनुहोस् |
के तपाइँ एक विज्ञापन एजेन्सी, फ्रेंचाइजी वा फ्रेंचाइजी व्यवसाय संग काम व्यवसाय परामर्शदाता हो? यदि हो भने तपाईं तल एक अधिकृत फ्रन्चिसेक मिडिया पार्टनर बन्न दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
एक अधिकृत फ्रन्चाइसेक मिडिया पार्टनरको रूपमा तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु मा पारित गर्न को लागी तपाइँको आफ्नै अनौंठो छुट कुपन प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाइँका ग्राहकहरु सबै विज्ञापन प्याकेजहरु मा एक प्राथमिक छूट प्राप्त हुनेछ PLUS तपाइँ पनि तिनीहरुको विज्ञापन खर्च मा कमीशन प्राप्त हुनेछ!
तपाईंको ग्राहकहरूले पैसा बचत गर्दछ र तपाईं एक चलिरहेको असक्रिय राजस्व स्ट्रिम सिर्जना गर्नुहुन्छ त्यसैले सबैले लाभ उठाउँछन्। एक अधिकृत फ्रन्चाइसेक मिडिया पार्टनर बन्नको लागि आवेदन दिन कृपया तलको फारम भर्नुहोस्
तपाईँको ई - मेल ठेगाना*